QM Oo Ka Digtay Macaluul Soo Food-saarta Dalalka Bariga Africa Dhawaan – Heemaal News Network
Qaramada Midoobay ayaa ka digtay halista macaluul soo foodsaarta dalalka Bariga Afrika mustaqbalka dhaw hadii aan wax laga qaban mawjadaha Ayaxa ah ee ku habsaday dalagii dalalka dhaca bariga qaarada Africa.
Cayayaanka ayaa ilaa iyo hadda saameyn ku yeeshay beerahii dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Kenya, Tansaaniya iyo Ugaandha, ayaxaas oo cunaya dalagii la beertay iyo daaqii dabiiciga ahaa ee dalalkaas, si dhaqso ahna ay u soo ifbaxday in dadka ku nool bariga Africa ay durba la il daran yihiin cunno yari.
Hayada Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ee (FAO) ayaa u codsatay si dhaqso ah in loogu yabooho lacag dhan $76m oo doolar oo loogu talagalay buufinta hawada si loo xakameeyo dhibaatada uu ayaxu u gaystay dalaga iyo daaqaba toddobaadyada soo socda.
Haddii kale waxay leedahay Hayadu Ayaxan oo hadaba ah boqolaal bilyan waxa suuragal ah in mudo kooban uu ku dhalo tiradiisuna ay laba jibaaranto, arintuna ay faraha ka baxdo ilaa ay sababto macaluul qasab ka dhigta in lagu yabooho gargaar bini’aadanimo oo aad u ballaaran, kana badan lacagaha wax ka qabashada Ayaxa ah ee ay hada codsatay FAO.
“Warka farxada leh ayaa ah in aan haysano laba xili oo dalagu soo go’o hadana aan bartanka u taaganahay, sidaa darteed waxaan fursad u haysanaa in aan yareyno waxyeelada iyo culeyska uu ayaxu ku hayo dalagii la beertay ka hor xilli-qodaaleedka soo socda ee ka bilaabanaya bilaha Maarso iyo Abriil inta badan dalalka bariga Africa,” ayuu yidhi Agaasimaha Xaaladaha Degdegga ah hayada FAO oo lagu magacaabo Dominique Burgeon.
Ayaxan ku habsaday dalalka Bariga Africa ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee soo mara mudo ku siman 25 sano dalalka Somalia iyo Ethiopia, halka ay Kenya sheegtay in uu yahay kii ugu xumaa ee beeraheeda ku habsada mudo 70 sano ku siman.
Si kastaba ha ahaatee, Somalia ayaa hore ugu dhawaaqday xaalad deg-deg ah oo u baahan gurmad degdeg ah kadib ayax ku habsaday gobolada waqooyiga, bartamaha iyo koonfurta Somalia